Ahoana ny fomba famolavolana, fanoratana ary famoahana ny boky nosoratanao amin'ny Google Docs | Martech Zone
Raha nandalo ny lalan'ny fanoratana sy ny famoahana ebook ianao, dia fantatrao fa ny fikorontanana amina karazana rakitra EPUB, ny fiovam-po, ny famolavolana ary ny fizarana dia tsy natao ho an'ny fo reraka. Misy vahaolana ebook be dia be any izay hanampy anao amin'ny alàlan'ny fizotranao ary hamoaka ny ebook-nao amin'ny Google Play Books, ny Kindle ary ny fitaovana hafa.
Ny ebooks dia fomba mahafinaritra iray hametrahan'ny orinasa ny fahefany amin'ny habakabany ary fomba iray lehibe hisamborana ny mombamomba ny prospect amin'ny alàlan'ny pejy fananganana. Ebooks dia manome fampahalalana lalina kokoa noho ny whitepaper tsotra na ny topy mason-tsary. Ny fanoratana ebook dia manokatra mpihaino vaovao iray manontolo ihany koa amin'ny alàlan'ny fantsom-barotra fizarana eBook an'ny Google, Amazon ary Apple.
Misy mpanapa-kevitra marobe taonina any mitady ny lohahevitra momba ny indostriao sy ny famakiana ireo boky mifandraika amin'izany. Efa any ve ireo mpifaninana aminao? Misy vintana tsara mety hahitanao akany tsara sy lohahevitra azonao avoaka izay mbola tsy olon-kafa.
Ny tsara indrindra, tsy mila manakarama famolavolana ebook, marketing, ary serivisy fampiroboroboana… azonao atao ny manokatra Doc vaovao vaovao hampiasa ny Google workspace kaonty ary manomboka mamolavola, manoratra ary manondrana ny fisie ilaina ilainao hamoahana ny ebook-nao amin'ireo loharanom-pahalalana fototra an-tserasera.
Dingana amin'ny famoahana ny bokinao
Tsy mino aho fa misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny paikady amin'ny fanoratana ebook toy ny boky hafa… ny dingana dia mitovy. Ebooks orinasa dia mety ho fohy kokoa, kendrena bebe kokoa, ary manome tanjona manokana noho ny boky mahazatra na boky hafa. Te hifantoka amin'ny volavolanao ianao, ny fandaminana ny atiny ary ny fahaizany mandrisika ny mpamakinao handray ny dingana manaraka.
Omano ny bokinao - mandamina lohahevitra lehibe sy subtopika voajanahary mba hitarika ny mpamaky anao amin'ny atiny. Izaho manokana dia nanao izany tamin'ny bokiko tamin'ny famolavolana kisary trondro.
Omano ny anaranao - fizarana, verbiage ary fomba fijery tsy miova (olona voalohany, faharoa na fahatelo).
Soraty ny drafitrao - mandrafitra fotoana sy tanjona amin'ny fomba hahavitana ny drafitra voalohany amin'ny bokinao.
Zahao ny fitsipi-piteninao sy ny tsipelina - alohan'ny hizaranao na hamoahana ebook tokana dia ampiasao editor na serivisy toa anao Grammarly mamantatra sy manitsy izay lesoka tsipelina na fitsipi-pitenenana rehetra.
Makà valiny - zarao ny volavolan-tsainao (miaraka amin'ny fifanarahana tsy fampahafantarana) amin'ireo loharano azo antoka izay afaka manome hevitra momba ilay volavolan-dalàna. Mizara amin'ny Google Docs tonga lafatra satria afaka manampy hevitra mivantana amin'ny interface ny olona.
Avereno jerena ny volavolanao - amin'ny fampiasana ny tamberina, avereno jerena ny volavolanao.
Ampitomboy ny drafitrao - azonao atao ve ny mampiditra toro-hevitra, loharano na statistika mandritra ny kopianao?
Volavola ny fonony - mangataka ny fanampian'ny mpamorona sary mahafinaritra ary mamorona kinova vitsivitsy. Anontanio ny tambajotrao izay manaitra indrindra.
Vidio ny publication - fikarohana boky hafa toa anao, hahitanao hoe ohatrinona no amidiny. Na dia noheverinao aza fa ny fizarana maimaimpoana no fomba handehananao - ny fivarotana azy dia mety hitondra fahatokiana bebe kokoa ho azy.
Angony ny fijoroana vavolombelona - mitadiava manam-pahaizana vitsivitsy sy manam-pahaizana momba ny indostria izay afaka manoratra fijoroana ho vavolombelona momba ny ebook - mety ho avy amin'ny mpitarika aza. Ny fijoroana ho vavolombelona ananany dia hanampy fahatokisana ny ebook anao.
Mamorona kaonty mpanoratra - eto ambany ianao dia hahita tranokala manan-danja hamoronana kaonty mpanoratra sy pejin'ny piraofilina ahafahanao mampakatra ny ebook anao ary mivarotra azy.
Raketo fampidirana video - mamorona fampidirana horonan-tsary izay manome topy maso ny ebook misy antenaina ho an'ny mpamaky.
Mamolavola paikady marketing - fantaro ny influencers, fampahalalam-baovao, podcasters, ary horonan-tsary izay te-hanadinadna anao noho ny fahafantarana bebe kokoa ny ebook anao. Azonao atao mihitsy aza ny mametraka doka sy doka ho an'ny mpitsidika manodidina ny fandefasana azy.
Misafidiana tenifototra - mamorona tenifototra fohy sy maharesy lahatra amin'ny fampiroboroboana sy fizarana vaovao momba ny taona ebook an-tserasera.
Misafidiana daty fandefasana - raha mifidy daty fandefasana ianao ary afaka mitondra varotra amin'io daty fanombohana io dia azonao atao ny mahazo ny ebook anao a tsara indrindra be mpividy sata momba ny fitsangatsanganana amin'ny fisintomana.
Afaho ny boky ebooko - mamoaka ny boky ary manohy mampiroborobo ny bokyo amin'ny alàlan'ny dinidinika, fanavaozana ny media sosialy, dokam-barotra, lahateny sns.
Midira amin'ny fiaraha-monina misy anao - misaotra ireo mpanaraka anao, olona izay mandinika ny bokinao, ary manohy mamerina sy mampiroborobo azy raha mbola azonao atao!
Pro Soso-kevitra: Ny sasany amin'ireo mpanoratra mahatalanjona izay nihaona tamiko dia matetika no manana hetsika ary ny mpikarakara fihaonambe dia mividy kopian'ny boky ho an'ny mpanatrika azy ireo fa tsy (na ho fanampin'ny) mandoa azy ireo hiteny amin'ny hetsika. Ity dia fomba tsara hanatsarana ny fizarana sy ny varotra ny ebook anao!
Inona ny endrika fisie EPUB?
Antony iray lehibe amin'ny fizarana ny ebook-nao ny famolavolana ny ebook sy ny fahafahany manondrana madio amin'ny endrika iraisana izay azon'ny fivarotana boky an-tserasera rehetra ampiasaina. EPUB io fenitra io.
EPUB dia endrika XHTML izay mampiasa ny extension extension .epub. Fohy i EPUB famoahana elektronika. EPUB dia tohanan'ny ankamaroan'ny mpamaky e, ary misy rindrambaiko mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny smartphone, tablette ary solosaina. EPUB dia fenitra navoakan'ny International Digital Publishing Forum (IDPF) ary ny Book Industry Study Group dia manohana ny EPUB 3 ho fari-dalàna tokana amin'ny safidy amin'ny fonosana fonosana
Mamolavola ny Ebooko amin'ny Google Docs
Misokatra matetika ny mpampiasa Google Docs ary aza mampiasa ny fahaizany mandrafitra endrika. Raha manoratra ebook ianao dia tsy maintsy.
Mamolavola maharesy lahatra Cover ho an'ny ebooko amin'ny pejiny manokana.
Ampiasao ny singa Lohateny ho an'ny ebooko amin'ny a Title Pejy.
Ampiasao ny Lohateny sy ny Footers amin'ny lohateny ebook sy ny isa amin'ny pejy.
Ampiasao ny lohanteny 1 ary manorata a fanoloran-tena ao amin'ny pejiny manokana.
Ampiasao ny lohanteny 1 ary soraty ny fahalalana ao amin'ny pejiny manokana.
Ampiasao ny lohanteny 1 ary manorata a mialoha amin'ny pejiny manokana.
Ampiasao ny singa Lohateny 1 ho an'ny lohateny toko.
Ampiasao ny Fizahan-takelaka singa.
Ampiasao ny fanamarihana ambany pejy singa ho an'ny fanovozan-kevitra. Hamarino tsara fa manana alalana hamoaka indray ny teny nalaina na fampahalalana hafa naverinao havoaka indray.
Ampiasao ny lohanteny 1 ary manorata an About ny Author amin'ny pejiny manokana. Aza hadino ny mampiditra lohateny hafa nosoratanao, ny rohy media sosialy, ary ny fomba ahafahan'ny olona mifandray aminao.
Aza hadino ny mampiditra fitsinjaran-pejy rehefa ilaina izany. Rehefa mijery ny antontan-taratasinao araka ny itiavanao azy ianao, dia amboary ho PDF aloha hahitanao fa tena mitovy amin'ny itiavanao azy ilay izy.
Amin'ny fampiasana Google Docs, azonao atao izao ny manoratra, mamolavola ary mamoaka avy amin'ny rakitra an-tsoratra na antontan-taratasy rehetra nakarina mivantana tao amin'ny Google Drive anao. Oh - ary afaka izany!
Ity ny fomba fanondranana ny ebook-nao amin'ny Google Docs
Soraty ny lahatsoratrao - Manafatra antontan-taratasy miorina amin'ny lahatsoratra rehetra dia azo avadika ho Google Docs. Aza misalasala manoratra ny bokinao ao Google Docs mivantana, manafatra na mandrindra Microsoft Word antontan-taratasy na mampiasa loharano hafa azo vahana amin'ny Google Drive.
Manondrana toy ny EPUB - Google Docs izao dia manolotra ny EPUB ho endrika rakitra fanondranana teratany. Safidio fotsiny File> Misintona toy ny, dia Famoahana EPUB (.epub) ary vonona handeha ianao!
Hamarino ny EPUB anao - Alohan'ny hampidiranao ny EPUB amin'ny serivisy rehetra dia tadiavinao fa voalamina tsara io. Mampiasà Internet EPUB Validator hahazoana antoka fa tsy manana olana ianao.
Aiza no hamoahana ny EPUB anao
Ankehitriny rehefa azonao ny rakitra EPUB anao dia mila mamoaka ny Ebook amin'ny alàlan'ny serivisy maromaro ianao. Ny fivoahana voalohany ho an'ny fananganana zanaka dia:
Famoahana mivantana Kindle - mamoaka boky sy boky ary boky maimaim-poana amin'ny Kindle Direct Publishing, ary hahatratra ny mpamaky an-tapitrisany ao Amazon.
Portal momba ny famoahana boky Apple - ny tokan-toerana tokanana rehetra ho an'ny boky tianao, sy ireo tianao haleha.
Google Play Books - izay tafiditra ao anatin'ny fivarotana Google Play midadasika kokoa.
Smashwords - mpaninjara boky indie lehibe indrindra manerantany. Ataonay haingana, maimaimpoana ary mora ho an'ny mpanoratra na mpanonta na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao ny famoahana sy fizarana boky amin'ny mpivarotra lehibe sy tranomboky an'arivony.
Tena tiako ny manoratra horonantsary hampahafantatra ny bokinao, hametraka ny zavatra andrasana amin'ny atiny, ary handroaka olona hisintona na hividy ilay ebook. Ary koa, mamorona bio mpanoratra lehibe amin'ny serivisy famoahana mamela azy io.
Fampahafantarana: Mampiasako ny rohy ifandraisako amin'i Google workspace.
Tags: Amazonboky amazonaAndroidpaomaboky paomaeBookebooksepubfiovam-po epubmpanova epubEpub validatorepublicationGoogle DriveGoogle Play Booksahoana nofivarotana iBookshandrehitralibiomamoaka ebookmamoaka ebupXHTML
WordPress: Ampidiro ao anaty bilaoginao ny mpamaky MP3
Jolay 24, 2014 amin'ny 4:24 PM
Lahatsoratra tsara, Thanx!
9 Desambra 2015 à 8:17
Afaka manao boky amin'ny google docs ve isika?
Dec 10, 2015 amin'ny 12: 07 AM
Mino aho fa iray ihany izy ireo ankehitriny ry Maryam!
Jan 22, 2021 ao amin'ny 9: 55 AM
Miavaka ity. Izay nilaiko ihany izao.
Mar 20, 2021 amin'ny 4: 49 AM
Mahafinaritra. Tena manampy tokoa. Misaotra betsaka anao?
May 25, 2021 ao amin'ny 7: 35 PM
Manana pejy 300 misy sary kely aho isaky ny pejy. Ny fanamarinan'ny pub dia milaza fa latsaky ny 12MB. Ho lehibe loatra ve ny doka goggle-ko. Ahoana no hampihenana ny sary. Nopotehina izy ireo fa misy sary iray manontolo..
Jun 2, 2021 ao amin'ny 12: 50 PM
Misy fitaovana maromaro amin'ny Internet mba hampihenana ny haben'ny sary, saingy ny ankamaroany dia natao ho an'ny kalitao avoakan'ny efijery… izay 72 dpi amin'ny farany ambany. Ny fitaovana vaovao dia 300+ dpi. Raha misy olona maniry hanonta ny ebook-nao, dia tsara ny 300dpi. Te-hiantoka aho fa tsy lehibe noho ny haben'ny antontan-taratasy ny haben'ny sariko (koa aza ampidirina sy ahena izy io… ovao ny habeny eo ivelan'ny ebook-nao, dia apetaho ao). Ampidiro avy eo ny sary. Ny fitaovana fanerena sary ampiasaiko dia Kraken.